Alphabet company ရဲ့ Executive Chairman ရာထူးကနှုတ်ထွက်ပြီဖြစ်တဲ့ Eric Schmidt! – AsiaApps
Alphabet company ရဲ့ Executive Chairman ရာထူးကနှုတ်ထွက်ပြီဖြစ်တဲ့ Eric Schmidt!
December 22, 2017 WilliamApp NewsNo Comment on Alphabet company ရဲ့ Executive Chairman ရာထူးကနှုတ်ထွက်ပြီဖြစ်တဲ့ Eric Schmidt!
Google company မှာ Chairman နဲ့ CEO ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Eric Schmidt ဟာအခုလက်ရှိ Alphabet company ရဲ့ Chairman ရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Alphabet company ကနေအပြီးနှုတ်ထွက်သွားတာမဟုတ်ပဲ Technical Advisor position မှာရှိနေဉီးမှာပါ။ နှုတ်ထွက်တာထက် ရာထူးဆင်းသွားတယ်လို့ပဲဆိုရမှာပါ။
Eric Schmidt ရဲ့နောက်ကြောင်း ကိုအနည်းငယ်ဖော်ပြပါ့မယ်။ Eric ဟာ $11 billion ကျော်ပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပြီး Billionaire အဖွဲ့ဝင် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဉီး ဖြစ်ပါတယ်။ Google company ကို ၂၀၀၁ ခုနစ်မှာ Larry Page and Sergey Brin တို့ခေါ်ဆောင်မှုကြောင့်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီး CEO ရာထူးနဲ့စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Google မှာ CEO အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း Eric ဟာ Apple company ရဲ့ Board အဖွဲ့မှာလည်းတစ်ပြိုင်တည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ဘက် company နှစ်ခုမှာတစ်ပြိုင်နက်တာဝန် ထမ်းဆောင်နေတဲ့လုပ်ရပ်က Eric အတွက်တော့ မလွယ်ကူခဲ့ပါဘူး။ Eric ဘက်ကကြည့်ရင်လည်း Google ရော၊ Apple မှာရော နှစ်ခုလုံးကိုတိုးတက်စေချင်ခဲ့မှာပါ။ အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ပဲ Apple ရဲ့ Chairman နဲ့ CEO ဖြစ်သူ Steve Jobs နဲ့တောင် ကတောက်ကစ ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အကြောင်းကတော့ Android Phone တွေရဲ့ နည်းပညာက iPhone တွေနဲ့ဆင်လာတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Eric ဟာ Apple Board အဖွဲ့မှာ ၂၀၀၆ ခုနစ် ကနေ ၂၀၀၉ ခုနစ် အထိ ၃ နှစ်သာကာလတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ Eric အနေနဲ့ ၃ နှစ်သာကာလ အပြီးမှာတော့ Google နဲ့ Google ရဲ့ Group company တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Alphabet အတွက်ပဲအချိန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ Alphabet ရဲ့ executive chairman ရာထူးကနှုတ်ထွက်ပြီး Technical Advisor position ကနေပဲဆက်လက်ပံ့ပိုးတော့မှာပါ။
Eric Schmidt ဟာ Forbes ရဲ့ ranking အရ ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ် ၁၀၀ ကျော်မှာပါဝင်တာကြောင့် ကျန်ရှိနေတဲ့အချိန်တွေကို အေးအေးဆေးဆေး ဖြတ်သန်းဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုလို့ပဲဆိုရမှာပါ။
၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီအစောပိုင်းလောက်မှာထွက်ရှိမယ့် Samsung Galaxy A8 နဲ့ A8+
ဓာတ်ပုံတွေကို အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးမယ့် Adobe Photoshop Express